Baarlamaanka oo Dib u eegis ku Sameeynaya Wasiir Xoosh (Xildhibaano isu gacan-qaaday) – Balcad.com Teyteyleey
Baarlamaanka oo Dib u eegis ku Sameeynaya Wasiir Xoosh (Xildhibaano isu gacan-qaaday)
Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaliya Cabdiraxmaan Xoosh jibriil ayaa maanta ka cudurdaartay in u hortago Xildhibanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaliya, xili maanta lagu waday in su’aalo la weydiiyo.
Wasiir Xoosh ayaa warqad codis ah u direy Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaliya taasi uu kaga codsaday in dib loogu dhigo kulanka su’aalaha lagu weydiinayo, isagoo tilmaamay in 11 Agosto uu diyaar u yahay inuu hor-yimaado Baarlamaanka Soomaliya.
Balse qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamanka Soomaliya ayaa ka hor-yimid codsigaas, isla markaana sheegay in aanay macquul aheyn, cosiga ka yimid Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaliya.
Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka oo maanta shir gudoominayay kulanka maanta ayaa sheegay in Xildhibaanada ay ku xiran tahay inay fasax siiyaan iyo in kale, iyadoo lagu in cod loo qaado warqada fasaxa uu dalbaday Wasiir Xoosh oo ah inuu Baarlamaanka ku hor imaanayo 11 Agosto iyo in kale.
Waxaa Xusid Mudan in Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya Qaar kamid ah Ay Jeex jeexeen Warqadaasi.
Buuq iyo Sawaxan ayaa is qabsaday xarunta golaha shacabka iyada oo qaar kamid ah xildhibaanada ay gacmaha iskula tageen .
Gudoomiye Jawaari ayaa dalbaday Ciidan si amaankiisa loo sugo.
Dhinaca kale 85 Xildhibaan ayaa isku raacay in dib u eegis lagu sameeyo wasiirka Dastuurka halka 77 kalena ay diideen.
The post Baarlamaanka oo Dib u eegis ku Sameeynaya Wasiir Xoosh (Xildhibaano isu gacan-qaaday) appeared first on Ilwareed Online.
Jose Mourinho iyo milkiileyaasha Manchester United oo isku dhacay (Waa maxay sababta?)